धरहराबाट खसेकी रमिला मिडियामा : भन्छिन् “मैलेजस्तै यसले पुन`जीवन पायो, यहीँ रोजगारी पाऊँ” (भिडियो सहित) – Ap Nepal
धरहराबाट खसेकी रमिला मिडियामा : भन्छिन् “मैलेजस्तै यसले पुन`जीवन पायो, यहीँ रोजगारी पाऊँ” (भिडियो सहित)
April 24, 2021 528
आम्मै मालाई त ड`र लागो !रमिला श्रेष्ठले दुवै हातले मुख छोप्दै भनिन् । उनका आँखा`हरु नवनिर्मित धर`हराको टुप्पो`तिर सोझिएका थिए ।सुन्धारा क्षेत्रमा आज अरु दिन`भन्दा बाक्लो थियो मानिसहरूको चहलपहल । मोटर`साइकलमा हुइकिँदै आउने`हरू टक्क अडिन्थे र खल्तीबाट मोबाइल निकाल्थे ।
अनि, मुस्कु`राउँदै धरहरालाई पृष्ठ`भूमिमा राखेर तस्वीर/सेल्फी खिच्न थाल्थे । पैदल यात्री पनि एक-दुई स्न्याप हानेर मात्रै अघि बढ्थे ।केही दिनदेखि धर`हराका तस्बिर सामा`जिक सञ्जालमा भाइरल भइ`सकेका छन् । भूकम्पले भ`त्केको ऐति`हासिक संर`चनाको सफलतापूर्वक पुनर्निमाण गरेकोमा सर`कारले जनता`बाट धन्यवाद खाइरहेको छ ।
कसैले चाहिँ धर`हरा बनाउने पैसाले ‘यतिवटा अस्प`ताल बन्थे’ भनेर हिसाब पनि निकालिरहेका छन् ।यता, रमिलाको मनमा चाहिँ अर्कै हलचल छ । उनको मानस`पटलमा अहिले घुमि`रहेका छन् आजभन्दा ६ वर्ष`अगाडिका परि|दृष्यहरू । २०७२ सालको वैशाख १२ गते पनि उनी यहाँ आएकी थइन् । धर|हरा चढेकी थिइन् । माथि पुगेर उल्ला|सित बन्दै चिच्या`एकी थिइन् ।
त्यस`पछि भने के-के भयो न उनी सम्झिन सक्छिन्, न सम्झिन चाह`न्छिन् ।हो, भूक`म्पले देश ह`ल्ला`एको क्षण रमिला धरहराको टुप्पोमा थिइन् । धरहरा ढले`सँगै उनी भूइमा बजा`रिएकी थिइन् । तर, बाँचेकी थिइन् ।भू`कम्पले भत्केको धर`हराको ठूटो अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ । त्यो ठू`टोलाई चि`नोका रुपमा यत्तिकै छोप`छाप पारेर अर्को धरहराको नव`निर्माण भएको छ ।
नवनिर्मित धर`हराको उद्घाटन हुने अघिल्लो दिन रमिला यहाँ आएकी छन् ।नयाँ धरहरा देख्दा कस्तो लाग्यो उन`लाई ?‘खुशी लाग्या छ,’ आँखाको कालो चश्मा`लाई टाउकोमा धकेल्दै भनिन्, ‘तर, कस्तो ड`र पनि लागि`राख्या छ ।’‘तपाईंले त धर`हराबाट खसेर पुनःजीवन पाउनुभएको है !’
उनी थोरै मुस्कुराइन् र सहमतिमा मुन्टो हल्लाइन् । अनि धरा`हरातर्फ औंल्याउँदै भनिन्, ‘मैले मात्र हैन, ऊ… त्यसले पनि पुनःजीवन पायो ।’धरहरा`बाट ख`सेपछि चो`टग्रस्त भएको रमिलाको खुट्टा पनि भर्खरै ठीक भएको छ । एक वर्ष`अगाडि उनले खुट्टामा रा|खिएको स्टिल झिके`की थिइन् ।
‘म पनि उभिएँ, धर`हरा पनि उभियो,’ उनले गर्वको भावमा भनिन् ।‘अब कहिले चढ्ने नयाँ धरा`हरा ?’मानौं प्रश्नले नै रमिला|लाई अत्यायो ।‘नाइँ-नाइँ नचढ्ने ! ड`र लाग्छ मलाई…,’ उनी साँच्चिकै नर्भस् देखिइन् ।त्यस`दिन साथी सञ्जीव श्रेष्ठ`सँग रमिला सुन्धारा घुम्न निस्कि`एकी थिइन् । एकोहोरो हिँडि`रहेका उनी|हरूले अगाडि धराहरा देखे ।
सञ्जिबले भने- चढ्ने हो ? रमिलाले सह`मति जनाइन् ।दुवै उत्साह`साथ धराहरातर्फ लागे । टिकट काटे । अनि, रमिला साथीको अघि`अघि सिँढी उक्लिइन् । माथि रेलि`ङमा पुगेर काठ`माडौं नियाल्दै रमाए उनी`हरू । तर केही`बेरमै अचा`नक धरह`रा हल्लिन थाल्यो । उनीहरुले केही मेसो पाउन नसक्दै धरहरा गल्र्याम्गुर्लुम् भयो ।
९ तले धरहराबाट उछि`ट्टिएर उनीहरु तल भूइँमा बजारिएका थिए । रमिला बेहोश थिइन् ।‘होस आउँदा त म हस्पिटलमा थिएँ । अरुको फोन मागेर घरमा खबर गरेकी थिएँ । होस जाने आउने भइरहेको थियो,’ रमिला सुनाउँ`छिन् ।उनको गोडा भाँचि`एको थियो भने उनका साथीको हात । त्यही गोडा ठीक हुन निकै समय लाग्यो रमिलाको । टाउको र अनु`हारका भागमा पनि चोट लागे`का थिए ।
एक महिना अस्प`ताल बसिन् रमिला । अस्पताल बस्दा पनि परा`कम्पनहरू आइ`रहन्थे । उनको सातो जान्थ्यो । ज्यान बाँच्दा`को खुसी त थियो नै । पटक-पटक परा`कम्प आउँदा अब बाँचिन्न कि भनेझैं भइरहन्थ्यो ।अस्प`तालमा पहिलो`पटक गोडाको शल्य`क्रिया बिग्रियो । जसले गर्दा उनले थप दुःख झेलिन् । पछि गोडामा स्टिल राखिएको थियो । झण्डै डेढ वर्ष त वैशाखी टेकेर हिँडिन् ।
‘स्टिल नि`कालेको एक वर्ष भयो । तर, पूरा निको भएको छैन । बेला-बेला दुखिरहन्छ,’ उनी सुनाउँछिन् ।घरको आ`र्थिक अवस्था बलियो थिएन । सुरुमा सरकारले उप`चार गरे पनि सबै खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्यो । बुवाले ऋण-धन गरेर उनको उप|चार गराए ।धराह`राबाटै खसेका एक जनासँग उन`को पछि भेट भयो । त्यो भेटले उनको मन नराम्ररी हतासियो ।
‘उहाँको त खुट्टा नै काटे`को रहेछ । त्यो देख्दा आफू`लाई भाग्य`मानी सम्झिएँ,’ उनले भनिन् ।भूकम्प जाँदा रमिला कक्षा ९ मा पढ्थिन् । घाइते शरीरका कारण एक वर्ष पढाइ छुट्यो । अहिले उनले प्लस टुको परीक्षा सिध्याए`की छन् । ब्या`चलर पढ्ने तयारीमा छिन् ।
हरेक वर्ष जब वैशाख १२ आउँछ, त्यति`बेला मिडियामा रमि|लाको खोजी हुन्छ । बाँकी अरु दिन कसैले सम्झिँदैन । यसमा रमिलाको ठूलो गुनासो छ ।‘म`लाई अब अन्त`र्वार्ता दिन पनि मन लाग्दैन । जति अन्तरवार्ता दिए पनि कसैले केही गरेको होइन । न उपचार खर्च पाएँ, न रोजगारी । मिडि`याले पनि हाम्रो दु:ख देखाएर भ्यूज कमाउँछ`न्, तर सहयोग गर्दैनन्,’ रमिलाले हामी`लाई नै झटारो हानिन् ।
उनलाई यतिबेला रोजगारी चाहिएको छ । बुवा`को सामान्य खेतिकिसानीले परिवारको भरणपोषण गाह्रो हुँदै गएको उनले बुझेकी छन् । भाइ सानै छ । त्यसैले आफैंले कमाएर परिवारलाई सहारा दिन चाहिन्छन् । सँगसँगै पढाइलाई पनि निरन्तरता दिनु छ ।
‘घरमा बा आमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू उकालो-ओरालो गर्न सक्नुहुन्न । शरीर कम`जोर भएको छ । अब त मैले पनि केही गर्न पाए हुने,’ उनी मलिन सुनिइन् ।रमिलाले हामीसँग आफ्नो एउटा इच्छा सुनाइन् ।‘धरहरामा यत्रो काम भइ`रहेको छ, मलाई पनि सर`कारले यहीँ रोजगारी मि`लाइदिए हुन्थ्यो’ उनले भनिन्, ‘लौन, तपाईंहरुले पनि भनिदिनु ।’
जुन ध`रहराबाट खसेर पनि उनको ज्यान बाँच्यो, त्यही धर`हरामा रोजगारी गर्ने रमिलाको इच्छा अर्थ`पूर्ण थियो । के उनलाई यहाँ काम लाग्दैन ।‘एक-दुई दिन पो डर लाग्ला । सँधै डराएरै बस्न पनि त भएन,’ उनले भनिन्, ‘म यहाँ`बाट खसेर बाँचेकी छु, अब मैले यहीँ काम पाउनुपर्छ ।’
भोली हुने धरहराको उद्घा`टनमा ‘आउनुपर्छ है’ भनेर पुन|र्निमाण प्राधि`करणबाट उनलाई फोन आएको छ । निम्तो कार्ड पनि आउने बताइ`एको भए पनि उनले पाए`की छैनन् । खोइ जाऊँ कि नजाऊँ,’ उनले अन्यो`ल मुद्रा`मा भनिन् । – नेपाल प्रेस
PrevLULU, PANDA , NESTO जस्ता मार्केटमा नेपाली उ त्पादन पुर्‍ याउन पहल
Nextसधै खाने गर्नुहोस मेवा, खाँदा हुन्छन् यी फाइदाहरु…
ह्वात्तै घट्यो डलर सहित आज यी बिदेशी मुद्राको भाउ..
‘छोरा निको भएर बोलावस’ छोरो बोल्ने आशमा टेकु अस्पतालको परिसरमा पर्खिरहेका बाबुको इच्छा
आमाको फोन एकाएक आउदा अन्तर्बा, तामै रोए अलिफ (हेर्नुस् भिडियो सहित )
‘कौन बनेगा करोडपति’को चिठ्ठाको प्रलाेभनमा यसरी ठ’गिन्छन् मानिसहरू ! लाखाैँको ठगी
रहिनन् भारती , बलिउड अभिनेता सोनुले भाबुक हुदै लेखे यस्तो स्टाटस्.. मेरो मुटुमा तिम्रा लागी खास ठाउँ रहनेछ.. (भिडियो) (2697)